Izinketho zokuthumela ze-Ecommerce ezi-3 ezenza Ukuziphatha Kokuthenga | Martech Zone
Ngesinye isikhathi ngonyaka odlule, U-Omaha Steaks engaqondakali iqale ukuhambisa izingcingo kunombolo yethu ye-Google Voice engashicilelwe. Silinganisela amavoyisimeyili angama-20 kuye kwangama-50 ngosuku futhi inani liyanda njengoba sisondela kuKhisimusi. Ngibathumele i-imeyili, ngathintana nabo kuFacebook, futhi angikwazi ukubenza baphendule izingcingo ezingama-800 noma ezingasho lutho ezibika izingqinamba zokulethwa noma imibuzo ephathelene nama-oda. Uma wazi othile ovela eqenjini lakhe eliphezulu, ngingathanda ukubona laba bathengi benakekelwa futhi inkinga yomzila ilungiswa… lokhu kuyacasula ngempela.
Lokho okukhomba futhi nokuthi ukuthunyelwa kubaluleke kangakanani zonke ukuthengwa kwe-ecommerce. Ngaphandle kwezinketho zokuthumela ezinokwethenjelwa futhi ezingabizi kakhulu, inani lesevisi (noma ukunambitheka kwama-steaks) kulahleka unomphela. I-Walker Sands isanda kuveza ukuthi ukuthunyelwa kwemali kubaluleke kangakanani ekuziphatheni kokuthenga komthengi:
Ukuthumela kwamahhala kubalwa ngaphezu kohambo losuku olufanayo - Ukuhanjiswa kwamahhala kuyaqhubeka nokukhuthaza kakhulu, cishe abathengi abayisishiyagalolunye kwabayishumi ukubika ukuthi ukuhanjiswa kwamahhala kuzobenza bathenge kakhulu ku-inthanethi, ngenkathi cishe isigamu sabathengi bathi ukuthunyelwa ngosuku olufanayo kungabenza bathenge kakhulu ku-inthanethi. Umthombo: I-Walker Sands 2016 Ikusasa Lesifundo Sokuthengisa
Ukuthunyelwa okuqinisekisiwe kuphatha isisindo esiningi kubathengi - ukuphathwa kwempahla sekuvele kuyinto ebalulekile kubathengi, futhi leli nani lizokwanda kuphela njengoba uKhisimusi usondela. 68% yabathengi cabanga ukuthunyelwa kwamahhala lapho ukhetha umthengisi, futhi 62% cabanga ukulethwa okuqinisekisiwe, okubaluleke kakhulu kubathengi ezinsukwini eziyi-10 ezizayo. Umthombo: I-Astound Commerce's Umbiko Weholide ka-2016
Ijubane lokuthumela nentengo kungenza noma kuphule ukuthengisa - Ama-60% amalungu e-Amazon Prime futhi U-41% wamalungu angewona uNdunankulu ithe ukuhambisa kancane kuhamba kubayekise ukuthenga. Futhi iningi labaphenduli - ngaphezu kwe-85% - bavumile ukuthi izindleko zokuhambisa ziyabavimba ekuthengeni into. Umthombo: Isifundo Somsebenzisi se-feedvisor Amazon
Ngokuya ngokuhlaziywa kwabathengi abangaphezu kuka-1,400 2016 baseMelika, umbiko wesithathu wonyaka weWalker Sands uhlaziya ubuchwepheshe be-backend obubhekele ukudala ushintsho ekuziphatheni kwabathengi eminyakeni edlule. Ngokumba ngokujulile kudatha, ucwaningo luhlaziya ushintsho olukhulu olwenzeka esikhaleni sobuchwepheshe bezokuthengisa nokuthi abathengi nabathengisi bangalindela ini ngo-XNUMX nangaphezulu.
Ikusasa le-Walker Sands 'le-2016 le-Retail Study lihlola ushintsho olucashile ekuziphatheni kwabathengi kanye nemithelela ebaluleke ngokulinganayo.
Landa i-2016 future of Study Retail
Tags: ukuthumela kwamahhalaikusasa lokuthengisaUkuthunyelwa okuqinisekisiweU-Omaha Steaksukuvuselela ukuthengisalokuthumelaisivinini sokuthumelaisihlabathi sokuhamba